Ampasindava-Nosy Be : hanapotika ny tontolo iainana ny fitrandrahana « terre rare » | NewsMada
Ampasindava-Nosy Be : hanapotika ny tontolo iainana ny fitrandrahana « terre rare »
Par Taratra sur 18/04/2017
Manangona sonia ny fikambanana Coillectif Tany, hanoherana marindrano ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, “terre rare” ataon’ny orinasa TREM any amin’ny Nosy Ampasindava, mialoha ny hidirana an’i Nosy Be. Fanapotehana ny zavamananaina sy ny rano any an-toerana ny fitrandrahan’ilay orinasa sinoa ity toerana ity.
Manangona sonia, ankehitriny, ny fikambanana Collectif Tany, halefa any amin’ny filoha Rajaonarimampianina hanoherana ny fitrandrahan’ilay orinasa sinoa, Tantalum Rare Earth Madagasikara (TREM), harena an-kibon’ny tany antsoina hoe “terre rare” (karazan-tany tsy fahita) any amin’ny Nosy Ampasindava, toerana akaikin’ny fidirana any Nosy Be, any avaratra andrefan’i Madagasikara. Ho an’ny Collectif Tany, tsy mazava ny fomba nahazoan’ny TREM fahazoan-dalana, nomen’ny fanjakana fony fitondrana Tetezamita, hitrandraka “terre rare” ny toerana mirefy 300 km2. Tsy nisy koa ny “tena” fakan-kevitra ny vahoaka.
Nambaran’ity fikambanana ity anisan’ny tena mampidi-doza indrindra ny fitrandrahana ity harena an-kibon’ny tany ity. Mila mampiasa akora simika chlorure de sodium, sulfate d’ammonium, na asidra oxalique. Ampiasana rano betsaka ihany koa, mitarika ny fandotoana ny rano sy ny tsiron’ny tany manodidina rehetra ary indrindra ho zava-doza ho an’ny mponina. Andaniana sulfate d’ammonium 7 t, asidra oxalique 1,5 t ny ahazoana “terre rare” 1t.
Hanapoizina rano 1.000 t ny « terre rare » 1t avy amin’ny sulfate d’ammonium sy ny akoram-by aterany, miampy fako simika 2.000 t. Mihevitra ny hanondrana “terre rare” 10.000 t isan-taona anefa ny orinasa TREM mandritra ny 50 taona! Izany hoe, vinavinaina hatrany amin’ny 500 tapitrisa t ny rano ho voapoizina, sy fako simika 1 miliara t ao anatin’ny 50 taona.
Eo koa ny tsy fisian’ny toerana azo antoka hanatobiana ny akoram-potaka avy nosivanina ny « terre rare ».
Olombelona sy harena voajanahary maro
Anisan’ny toerana manana harena voajanahary tsy hita pesimpesenina ny any Ampasindava. Ahitana karazam-borona monina sy mandalo maro, biby mandady sy mikisaka tsy fahita raha tsy aty Madagasikara na any an-toerana ihany. Eo koa ny karazan-gidro lépilemur mittermeieri tsy hita raha tsy any Ampasindava. Mahatratra 15 ny karazana hazandranomasina mampinono, toy ny rorqual d’Omura, ny trozona, ny antsantsa trozona, ny trondra samihafa ary ny akorandriaka.
Manodidina ny 33.000 ny mponina any an-toerana, miaina amin’ny jono sy ny fambolena, indrindra ny lavanila, ny cacao, ny kafe, sns. Iaraha-mahalala koa ny lanjan’ny fizahantany any Nosy Be, akaikin’ity toerana tadiavin’ny fitondrana hopotehina ity, nefa tsy hitondra fampandrosoana ara-toekarena ho an’ny mponina any an-toerana akory.
Koa manoloana ireo rehetra ireo, manainga ny rehetra hanao sonia ny fanoherana ity tetikasa ity tsy hahita masoandro akory ny Collectif Tany.